▷ Maninona no maty i Fortnite
Fa maninona no maty Fortnite
Fantatry ny rehetra fa ireo olona milalao Fortnite Efa ela izy ireo no nitaraina momba ny fepetra vaovao noraisin'ny lalao momba ny fivoaran'ny lalao.
Izany dia satria ny olona mahita fihetsika izay tsy ilain'ny maro amin'ny lalao iray. Nanainga ny resabe ary hatramin'izao dia maro amin'ireo mpilalao no mieritreritra an'izany Fortnite dia ho faty.
Izany no antony hiresahantsika anio kely momba ity olana ity izay mampiady hevitra mandraka ankehitriny. Ka raha liana hahafantatra ny antony ianao Fortnite efa ho faty ianao tonga teo amin'ny toerana mety satria manana fampahalalana lehibe izahay.
Fa maninona no maty ny Fortnite?
Iray amin'ireo antony lehibe mahatonga anao ho faty Fortnite Izy io dia noho ny lalao izay nalehan'ny lalao ho an'ny mpilalao.
Betsaka ny fitarainana tonga momba izany ankehitriny Fortnite Toa tambajotra sosialy kokoa noho ny fisehoan-javatra fanaon'izy ireo matetika izany ary niteraka resabe. Epic Games efa nahalala an'izany ary nitady fanatsarana.
Na izany aza, tsy zavatra azon'izy ireo atao isan'andro na amin'ny manaraka izany na eo aza ny fanovana lehibe natao tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, mbola eo am-pahatongavana ny lalao muerto ho an'ny maro.
Saingy tsy zavatra midika vaovao ratsy amin'ny lafiny rehetra amin'ny teny izany, fa afaka manararaotra izany ianao mba hateraka indray ary hiverina ho iray amin'ireo tsara indrindra Battle Royale misy an'izao tontolo izao.
Ahoana ny fomba fananganana Fortnite amin'ny PS4
Rahoviana no havaozina ao Badoo ny voady